Lakolosy… | NewsMada
Par Taratra sur 29/08/2016
Zary efa tsy mahataitra intsony ny halatra lakolosy, mahazo vahana amin’ny faritra maro manerana ny Nosy. Efa nanao antso avo sy hentitra ny avy amin’ny fiangonana katolika saingy tsy misy mihaino. Mbola mitohy izany ary tsy misy ny fepetra raisin’ny mpitondra. Tsy fantatra intsony rahateo ny marina momba ity halatra ity na koa ho zary efa mahazatra toy ny halatra taolam-paty ka tsy ahitana mangirana ny ao ambadika sy ny atidoha mikotrika izany. Manana ny lanjany sy ny dikany ary ny tantarany eo anivon’ny fiangonana anefa io fitaovana iray io. Any ambanivohitra ohatra, ampanenoana intelo miantoana ary aseho amin’ny feo samihafa mialoha ny fidirana ny lakolosy. Karazan’ny fampahatsiahivana sy fampiomanana ny kristianina izany. Very anefa io fitaovana iray io noho ny asan-jiolahy…
Tahaka izany koa ny raharaham-pirenena. Fampanenoana lakolosy ampiry, avy amin’ny sehatra samihafa no efa natao teto saingy, tsy misy mihaino. Tsy misy miraharaha. Henoy izany ry hazondamosiko. Nampaneno lakolosy fanairana ny fiarahamonim-pirenena, ny mpanao politika, ny mpanao gazety, ny sendikà, ny mpandraharaha… Manao bemarenina tsy mihaino izany anefa ireo tandrifin’ny antso fanairana. Hiandrasana inona sy ahoana vao mba hahay hihaino na koa handray andraikitra momba ireo fitakiana sy fitarainana ireo ny mpitondra ? Lakolosy natao hanairana sy hampahatsiahivana ary koa hahatonga saina ireny manoloana izao tranga miseho eto amin’ny firenena, efa latsaka an-katerena izao. Midika ho fialana nenina ireny lakolosy ireny mba tsy ho tonga amin’ny saorovoro sy ny korontana eto isika.
Aoka tsy hanilika amin’ny hafa ny tsy fahombiazana na koa ny hitavozavoza. Atsaharo ny petatoko sy ny vahaolana vonjitavanandro. Atreho fa efa napetraka aminao ny andraikitra. Aoka koa anefa tsy hihaino feon-dakolosy tokana, toy ireo manodidina ihany. Henoy ny hafa fa tanindrazana iombonana ity ary samy ho eto foana ihany isika. Manàna finiavana ary diovy ny manodidina sy ny tanàna…